Garowe oo lagu qabtay bandhigga wax soo saarka Beeraha Deegaanadda Puntland. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Garowe oo lagu qabtay bandhigga wax soo saarka Beeraha Deegaanadda Puntland.
Garowe oo lagu qabtay bandhigga wax soo saarka Beeraha Deegaanadda Puntland.
April 14, 2019 - By: Mohamed Dahir
Garowe (HM):- Guud ahaan deeganaada Puntland waxaa ka jira isbedel sare oo laga gaaray dhanka dhul beerista,waxaana la beeray Qudaarta cagaaran,Geed miroodka ,dhirta quruxda iyo ubaxleyda ah & geedo kale oo muhiim ah,magalada Garoowe waxaa lagu qabtay munasabad balaran oo lagu soo bandhigayo dalagyada kala duwan ee kabaxay beeraha Puntland.
Munasabada waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka ,Beeraha & isbedelka cimilada,waxaana dadka beeraha ku howlani ay muujiyeen xirfadda ay u leeyihiin wax soo saarka beeraha iyo horumarinta deegaanka.
Beeralayda Puntland oo meelo kala duwan oo gobolada iyo degmooyinka ka kala yimid waxaa ay tilmameen caqabadaha iyo guulaha dhanka beeraha ka jira,waxaana ay hoosta ka xariiqeen in ay jiraan caqabado haysta beeraha sida.
Abaraha soo noqnoqda Guud ahaan Soomaaliya.
Biyaha oo aan ku filayn dhulka qaybtiis
Tababarada iyo aqoonta beeralayda oo u bahan in sare loo qaado
Dallaga oo ay adagtahay in la helo mid ku haboon beerashada
Dhibatada cayayaan oo xiliyeysan
Cuduro haleela dallaga gaar ahaan qudaarta ay kamidtahay Yanyadu.
Gacansiinta hay,adaha dowladda oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay.
Boholo iyo meelo isbedel ku dhacay dhulka .
Beeralayda Puntland waxaa ay hoosta ka xariiqeen in dallaga kazoo baxay beeraha Puntland uu yahay mid ku filan isticmaalka,iyadoo ay ku howlanyihiin sidii loo dardargelin lahaa horumarinta dhul beerashada,madaama ay beeruhu kamidyihiin meelaha uu ku tiirsanyahay dhaqaalaha ummada Soomaaliyeed.
Horseed Media.net Madaxda Dowladda Puntland oo kazoo qa i